China Mobile chengetedzo chipingamupinyi / matatu coil reza waya vagadziri uye vanotengesa | Xinpan
Matatu coils reza waya inogona kuiswa nyore pasina chikonzero chekukanganisa nzvimbo yepamusoro nekuchera maburi kana kuisa hwaro.
Inogona kushandiswa kwenguva zhinji, saka inoshandiswa zvakanyanya kune zviitiko zvikuru zvemitambo, dura rekuchengetedza, makonzati, kamwe kamwe kudzidziswa etc.
Nhatu coil razor waya ndeye inokurumidza kuendeswa chengetedzo pimendi yakakodzera kune anotyisidzira ari kubuda kana kwechigarire chigaro.
Nekwaniso yekuendesa 480 'yetatu coil reza waya mumaminetsi maviri chete, inotora nzvimbo yevashandi vakawanda maawa ekushanda mumunda. Chikwata ichi chinotakura vanhu vaviri chete uye chinobvisa mamiriro anogona kuita njodzi ane chekuita nekumiswa kweminda yematepi ematepi.
Zvehupfumi, zvakapusa, uye zvinoshandiswazve kukurumidza kuendesa system
Unyanzvi hwekushandisa mumaminetsi mashoma
Inobvisa kudiwa kwevashandi vakawanda maawa ekushanda mumunda, uye nenjodzi dzinogona kuenda nadzo
Zvinongoda kuti vanhu vaviri vaendese
Yakasiyana siyana coil diameter sarudzo dziripo
Yakagadziriswa dhizaini: ipfupi barb ine kwakakurudzira tepi uye yakakwirira tensile kwakakurudzira moyo
Makoiri akasungirirwa pamwechete mune imwe nzira yekurongedza chiuno kuti kudzikise chero kuedza kwekupinda
Inosanganisirwa zvirinani nemidziyo yekufungidzira
Isu tinotanga nemakumi maviri nemakumi matatu emadhijita concertina coils padivi-ne-parutivi pasi neine makumi matanhatu inch inch concertina coil yakagara pamusoro kuti ipe 7 1/2 tsoka yakakwira chengetedzo.
Isu tinoisa akaomarara ematanho ega ega tsoka gumi nerimwe kuti tipe rutsigiro. Tambo inorema inovimbisa iyo unit haina kupfuura-kuwedzerwa kana kudonha pakati pevashoma. Iyo dhizaini inovimbisa iyo mukomberedzo yakagadzikana. Kupfuura nepakati peichi chipingaidzo hazvigoneke pasina kuyedza kukuru kwekutema nekubvisa tambo. Inosanganisirwa zviri nyore nemagetsi ekuona michina.
Pashure: Tubular fenzi yakarukwa simbi fenzi 1.5m, 1.8m fenzi pani
Zvadaro: Concertina reza waya BTO-22 reza mesh 10m pamupumburu
Mutengo weRazor Wire
Jeri Razor Wire
Razor Nereza Barbed Wire